Ntughari akwukwo na kaadiboodu | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
El akwụkwọ na mpempe akwụkwọ ejiri osisi rụọ ha, akwụkwọ na kaadiboodu na-eri oke ma mbibi oke ọhịa ka ukwuu. Uru nke akwukwo na kaadiboodu bu na enwere ike iweghachite ya na megharịa ya imepụta akwukwo ndi ozo na kaadiboodu.
Banyere 60% nke akwụkwọ na mpempe akwụkwọ a gbakere ya maka imeghari. Nkewa nke nkwakọ ngwaahịa nke akwukwo na kaadiboodu n'ime ihe ndi ahu na-enye ohere ka mgbake ha jiri ha mee ihe ma mee akwukwo ohuru na nke ohuru mpempe akwụkwọ.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa itinye ha n'ime igbe pụrụ iche iji zere mmetọ gburugburu ebe obibi. Ozugbo enwetara akwụkwọ agafeela usoro nhicha, ndị eriri cellulosic pịa. Anyị na-ewepụta ụdị ihe dị iche iche kwa ụbọchị, mana ọ bụrụ na anyị enweghị ike igbochi mkpofu ahihia, anyị nwere ike ijikwa oke mkpofu ahụ. productos izere oriri ha na-enweghị isi ma ọ bụ jiri ha mee ihe kachasị.
Nzọụkwụ mbụ n'ịchịkwa n'efu bụ izere imepụta ha. Mgbe ọ bụla enwere ike, ekwesịrị ịhọrọ ngwaahịa na-enweghị nkwakọ ngwaahịa na-enweghị nkwakọ ngwaahịa na-enweghị isi. Akpa ma ọ bụ akpa a na-emegharị emegharị bụ ezigbo ihe ngwọta iji belata ojiji nke bolsas plastic dị na nnukwu ụlọ ahịa.
na na-ehichapụ ma ọ bụ akwụkwọ nhicha nwere ike dochie anya ya na ogbo ma ọ bụ akwa nhicha ahụ microfiber. N’adịghị ka nkwenye ndị mmadụ siri, akwa akwụkwọ ma ọ bụ akwa adịghị recyclable. Ozugbo ejiri ya, a na-ewere ya dị ka ihe fọdụrụnụ iji gbaa ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Ighaghari akwukwo na kaadiboodu